“ ယနေ့ မွေးနေ့ရှင်အတွက် ရည်ရွယ်လို့ – – – – – ´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ ယနေ့ မွေးနေ့ရှင်အတွက် ရည်ရွယ်လို့ – – – – – ´´
“ ယနေ့ မွေးနေ့ရှင်အတွက် ရည်ရွယ်လို့ – – – – – ´´
Posted by ခင်ခ on Jan 2, 2013 in Creative Writing | 44 comments
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်နေ့
ဒီနေ့ဟာ ရွာသူတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့မြတ်မင်္ဂလာနေ့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီရွာသူကတော့ – – – – – –
သူဟာ ကွန်မန့်တွေရေးရင်လည်း သေချာစွာခံစားရေးတတ်သူတစ်ဦး၊
သူဟာ ရွာသူရွာသားတွေ တွေ့ဆုံမှု့တွေမှာလည်း ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာ တွေ့ဆုံတတ်သူတစ်ဦး၊
သူဟာ မိဘမဲ့ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်းတွေကိုလှုတဲ့ ဒါဇင်ပလပ်မှာလည်း တက်ကြွစွာပါဝင်သူတစ်ဦး၊
သူဟာ ဒီရွာရဲ့ ရွာသူသက်တမ်းလည်း နှစ်နှင့်ချီကြာမြင့်စွာ ရပ်တည်နေခဲ့သူတစ်ဦး၊
သူဟာ ချောမောလှပသော ရုပ်အဆင်းရှိသူတစ်ဦး၊
အဲဒီ သူဟာ –
“ လည်လည်ထွက်ရင်း ငါးစာကျွေးခဲ့သူ ´´
( http://myanmargazette.net/160432/creative-writing/my-dear-diary )
“ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ရယ် ပြုံး မဲ့ ငိုင် မျက်နှာတွေရဲ့ပုံတွေရှာရှာဖွေဖွေတင်ခဲ့သူ ´´
“ ချစ်တယ်ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့ ´´
( http://myanmargazette.net/149819/society-lifestyle/relationships-family )
ဆိုပြီး မိမိ မိသားစုတွေနဲ့ နွေးထွေးရင်းနှီးစွာ နေသင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အကြောင်းအရာ၊ အရေးကောင်းလေး တွေ ရေးခဲ့သူပါ။
သမီးရဲ့မွေးနေ့ကို “ Happy Birthday ´´ ပါလို့ နုတ်ခွန်းဆက်ရင်း “ ယနေ့ကျရောက်သော မွေးနေ့ မှ သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်ပြည့်စုံသော ဘ၀တွေနှင့် ဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒမွန်ဖြင့် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်´´ မအိတုန် ခင်ဗျ။
စကားမစပ်…. ဘယ်တော့ စားရမှာလဲဟင်
ကျုပ် .. ဘဲဥ နောက်ကနေ ကပ်လျက် အနေအထားနဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် …
ဒေါ်အိတုံကြီးတစ်ယောက် ယနေ့မွေးနေ့မှစ လာမည့် နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်အောင် ဆော်ကြည် .. အဲလေ .. ဘဲကြည် ထီပေါက် … နတ်ပြည် မြန်မြန်ရောက်လို့ .. နတ်သား တစ်ဖက်ငါးရာနဲ့ စံမြန်းနိုင်ဘာစေဂျာ ..
မင်္ဂလာပါ တိုခြောက်ညက်နှာနဲ့ တိုဘဲဥချင့် ….
မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ …. ။
တိုဘဲဥရယ်စားဖို့ အချိန်စောင့်ဇယာမလိုပါဘူးနော် … စားမယ်ဆို … တရေးနိုးတောင် စေတနာ ပရပွနဲ့ ဘဲဥထကြော်ကျွေးဖို့ … အဆင်သင့်ပါပဲ … ခိခိ :harr:
တိုခြောက်ညက်နာပေးတဲ့ ဆုနဲ့ … မချွင်းမချန်ပြည့်ပါရစေလားချင့် .. အဟိ … ။
နတ်တား တဖက်ငါးရာရလို့ကတော့ .. တနတ်မှ ချန်မထားပဲ …လူကုန်ကူး .. အဲ နတ်ကုန်ကူးတဲ့ ဂိုဏ်းထောင်စားပစ်ပလိုက်မယ် … ခွစ်ခွစ်ခွစ် …
မမအိတုန် မွေးနေ့မှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေရှင်
“Happy Birthday & Happy New Year” Ei Tone.
အခုလို အသက် (၄၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာသည် နောင်လာမည့် နှစ်ပေါင်း (၁၂၀)တိုင်…
ချစ်သောသူများနှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြည့်စုံပြီး… အဲ… လိုအပ်သောဆုများ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြည့်စုံပြီး… ချစ်သောသူများနှင့် တစ်သက်လုံး ပျော်ရွှင်သွာနေထိုင်သွားနိုင်သောသူ
မင်္ဂလာပါ … မမနိုရာ ၊ အစ်မ မွန်ကစ်နဲ့ ချစ်ကိုကြီးကြောင်ဝတုတ်ရေ ။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ …. မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေနော် ။
ချစ်ကိုကြီး ဖွတ်တီးကတ်ကတော့ ….ဇာတိလေးက ပြပြလာတယ် .. နေ့ခင်းကြောင်တောင်တောင် … စကားမမှန်တော့ဘူး .. စမုတ်တုံးတော့မယ်နော် … ခစ်ခစ်ခစ်
Etone ရဲ့ ဘယ်နှစ်မြောက်မှန်းမသိသောမွေးနေ့မှသည် လူ့သက်တမ်းစေ့ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောဘ၀ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ပါစေ..
အသက်အရွယ်ကိုတော့ ကာယကံရှင်မူပိုင်အခွင့်အရေးကို လေးစားသောအားဖြင့်
ထဲ့ပြီးမရေးခဲ့ပေမယ့် သမီးရဲ့မွေးနေ့လို့ ထဲ့သွင်းရေးပေးထားလို့ ခင်ခ အသက်အရွယ်သိရင် ခန့်မှန်းလို့
ရနိုင်လောက်မယ်ထင်မိပါတယ် Crystalline ရေ။ ၀င်ရောက်ဆုတောင်းပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးပါ။
အသက်ကိုသိချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ဦးခင်ခရှင့် ဒီလိုပဲ …စာကြောင်းရှည်အောင်..နာမ၀ိသေသနထည့်လိုက်မိတာပါ… ခန့်မှန်းရရင်တော့ Etone.. 27/28 yrs…. ဦးခင်ခက ၅၀ ၀န်းကျင်ပေါ့..
မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ အိတုန်းရေ ….
ချစ်တဲ့ သူနဲ့လည်း အမြန်ဆုံး ပေါင်းစပ်နိုင်ပါစေနော် …
မပေါင်းချင်လို့ ဖင်လှည့်ခေါင်းလှည့် အမြီးမြှောက်လိုက် အီးပေါက်လိုက်လုပ်နေတာကို
38နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် 68နှစ်မြောက်မွေးနေ့တိုင် အပျိုရီးဘွနဲ့ အရိုးထုတ်ရပါဇီ။
နာတျောက်ထဲပျင်းလို့ အဖော်ရအောင် ဆုတောင်းပေးတာပါအေ ခိခိ။ :harr:
ဟွင်းဟွင်းဟွင်း … ဂျီးဒေါ် ပြာစိန် … J ၀င်နေတယ် တူညားအရွယ်တင် နုပျိုနေတာကို … ခစ်ခစ်ခစ်
ယူမယ့်လူမချိလို့ … အပိုရီးက … ဖြစ်ပါစေဆိုတာတောင် မဖြစ်ဘူး …. ဒါတော့စိတ်ချ .. အဟဲ … မင်းမှ မခြစ်ရင် ဘွပျက်တွားနိုင်ဒယ်ဆိုတဲ့ ကြောင်ကုတ်ခံချင်တဲ့လူတွေ တပုံဂျီးပဲ…… ။ ခိခိခိ …… :harr:
ကြေးမုံဂျီးများ ဖြစ်လေမလား… ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ဟက်ပီးဘက်သ့်ဒေးပါဗျာ… သိပ်သပ်ခြစ်တဲ့ကြောင်ကြီး
မွေးနေ့မှစ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေလို့…
ယနေ.မွေးနေ. မှစ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ တိုင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ခြင်းတွေနဲ.ပြီးပြည်.စုံတဲ့
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ.ရက် များကို အေးချမ်းစွာ လျောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို. …..ရွှာသူလေး တစ်ယောက်က ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်..
ဦးမာဃက သိပ်မပြောတတ်လို့ ခွင့်လွှတ်ပါ လို့
အခုလို ဂရုတစိုက် မွေးနေ့ဆုတောင်းတင်ပေးတဲ့ ဦးခင်ခကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တူမလေးမွေးနေ့နဲ့ တူနေတယ်။
ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေ ထက်တယ် သွက်တယ် ထင်ပါရဲ့။
ယနေ့မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်း၁၀၀တိုင်အောင် လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှ ပြည့်ဝပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖြာဖြာနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။ :hee:
မင်္ဂလာပါ အန်တီမမရေ …
ကျောင်းတက်တုန်းက မွေးနေ့ ၊ မွေးလ ၊ မွေးရက် တူသူ တစ်ယောက်နဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ခုတော့ အဆက်သွယ်မရှိတော့ပဲ …ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ မသိတော့ဘူး ။ နာမည်အစ စာလုံးနဲ့ အဆုံး စာလုံးပါ တူခဲ့ပါတယ် … အဲ့လောက်ကို တိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ် … ။ ဒါပေမယ့် အန်တီရေ စိတ်ကျတော့ သူက တည်ငြိမ်အေးဆေးပြီး၊ မြုံစိစိဖြစ်နေခဲ့တယ် …. ။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းအတွက်ကျေးဇူးပါ အန်တီ ။
အန်တီမမလည်း မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်မှ စပြီး .. စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ …လာဘ်လာဘတွေလည်း ဒီရေအလားတိုးတက်ပါစေနော် … ။
ဘ၀ဟာ စိတ်တက်ကြွခြင်းနဲ့ အတူ ရံဖန်ရံခါ တော့ စိတ်အားပျော့မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် တက်ကြွခြင်းတွေနဲ အတူကိုယ့်ဘ၀ကို
အရာရာဖြတ်သန်းနိုင် အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တာတွေကို ။
မွေးနေ့ မှနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ။ အောင်မြင်မှုများစွာ ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေ ။။
မင်္ဂလာပါ အန်တီအေးရေ …. ။
အန်တီအေးရဲ့ ဟောကိန်းလေးကို အကြွင်းမရှိထောက်ခံလိုက်ပါတယ် … ။ ကွက်တိကို မှန်ကန်နေတာကြောင့်ပါ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဦးဆောင်နေတာလည်း ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပါ ….အသိဥာဏ်ရင့်သန်မှုထက် ၊ စိတ်ခံစားမှူဘက် ပိုအားသန်တဲ့ လူအမျိုးစားထဲကပါ ။ အမြဲ active ဖြစ်အောင်နေလေ့ရှိပေမယ့်လည်း … တခါတလေ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ ၊ စိတ်လျော့စိတ်ပျော့သွားတာမျိုးတွေနဲ့ ကြုံရလေ့ရှိပါတယ် ။ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးအတွက်လည်းကျေးဇူးပါ ။ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင့် ။
AKKO ကြေးအိုး အမြန်သောက်ရပါစေ
အိတုန်းညီမ ဒီမွေးနေ့ မှသည် နောင် နှစ်ပါင်း များစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်း မြေ့ သောမွေးနေ့ ပေါင်း များစွာကို ချစ်သောသူများ နဲ့အတူ တကွ ပျော် ရွှင်စွာဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေ။
ဦးခင်ခ ရဲ့ အညွှန်းတွေ ဖတ်နေရင်း ဘယ်သူ ပါလိမ့် တွေး ရင်း မျက်စိထဲ အိတုန်း ကို ပဲ ပြေး မြင် နေမိတာ ၊ ဆက်ဖတ် ကြည့် တော့ လည်း ဟုတ်နေတယ်။
အိတုန်း က သမီး အရွယ် ဆိုတော့ ဦးခင်ခ အသက် လည်း မငယ်ဘူး ပဲ။
မင်္ဂလာပါ သဂျီး …
အပိုရီးမျက်နှာ မြင်ချင်တာများ … စကန်ဖတ် … အဲ .. ဒါ့ပုံရိုက်ပြီး ပို့လိုက်မယ် … ။
အရပ်ပြော ဟိုလို .. မျက်နှာမြင်တာကတော့ …… ဝေးးးးးးးးးးး ပါသေးကြောင်း …. ။ တစ်နှစ် .. နှစ်နှစ် .. သုံးနှစ် … + + + မထင် …. ခိခိ … ။
မောင် ဓုဝ says:
သူတော်ကောင်တို့၏ အသက်ရှည်ခြင်း အဆင်းလှခြင်း ချမ်းသာကြီးခြင် ခွန်အားကြီးခြင်း ဉာဏ်ပညာကြီး
ခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံပါစေလို့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အိတုန် ရေမွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။ ရင်ထဲကဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေဗျား
Zodiac signs အရဆိုရင် Capricorn ပေါ့။
မြန်မာလို တောင်ဆိတ် ခေါ်မလားဘဲ။
Traditional Capricorn Traits တွေကတော့
Patient and careful ကြောင့် မောင်ကြေးအိုး ခမျာ လူပျိုကြီး ဖြစ်နေရတာ နေမှာ။
မွေးနေ့ မှသည် စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ စွာ နဲ့ အောင်မြင်သော ဘဝ လမ်း မှာ အများအကျိုး သယ်ပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်သာသူ ဖြစ်ပါစေ။
လိုအပ်သောဆု များ အားလုံး ပြည့်ဝပါစေ။
အရီး ( Avatar မှာ Capricorn ပုံလေး ပြောင်းထားတယ်။)
ကိုခင်ခ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ :hee:
Capricorn ရဲ့ Zodiac signs ကိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်ရော၊ birthday wish လုပ်တဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါ
Humorous and reserved တွေထဲက ….. disciplined ဆိုတာကတော့ .. တသတ်မတ်တည်း မရှိပဲ … အခြေနေအချိန်ခါကို လိုက်ပြီးပြောင်းလဲတတ်ပါတယ် .. အဟီး
အုံတိရေ ဟိုဘက်ကဆုတောင်းအတိုင်းပါပဲရှင့် :harr:
အိတုံ နဲ့ကျုပ်နဲ့ ဟာ
ဟိုးတုန်းက ရွာထဲမှာ တစ်ဖက်ထဲအတူတူ
ကိုခင်ခ ရေးမှ သူ့ မွေးနေ့ ဆိုတာသိရတာကလား
မွေးနေ့ မွေးရက်မှ စရွေ့ 
ချစ်သော ဒေါက်တာကိုကို နဲ့ အမြန်ဆုံး ညားပါစေ
မမ အိတုန်…။ မိုက်လေး..မွေးနေ့ကိုနောက်ကြမှရောက်ဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ပါနော်……။
မွေးနေ့လေးမှာ လိုသမျှဆုတွေတောင်းလို့ တောင်းသမျှဆုတွေလည်း..
မွေးနေ့ မှစပြီး သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေဗျာ …။
လို တ ရနှင့် 
ကမ္ဘာတည်သ၍ ပြည့် စေသော်ဝ် …..။
ဤ မွေးနေ့ ကလေးမှ ….စပြီး..
ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ချမ်းသာ စွာနဲ့ 
ဘ၀ခရီးလမ်း ဖြောင့်ဖြူး.သာယာ နိုင်ပါစေ..နော် ။
အေးချမ်းစွာ ပြည့်စုံဘ၀ ထဲမှာ..ရည်မှန်းထားသမျှ..အရာရာ ..
ရရှိနိုင်ပါစေ..လို့ …လည်း.ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
မမတုံ ရဲ့မွေးနေ့လေးကို သတိတရ နဲ့ဝေမျှ အသိပေး လက်ဆောင် ရေးပေးတဲ့ 
Happy Birthday ပါ E tone ရေ ။
မင်္ဂလာပါ … အန်ကယ်ခင်ခ ၊ အစ်မ Crystalline ၊မနွယ်ပင်၊ ဦးကြောင် ၊ မွန်မွန်၊ ကို ချိုကြီး ၊ ညလေး၊ အူးမာဃ၊နန်းတော်ရာသူလေး ၊ကိုရွာစားကျော်၊ အစ်မ မိုချို ၊ ကိုဓုဝေ ၊ ကိုmyanmarcitizen ၊ မရွှေကြည် ၊ ကိုပေ ၊ မိုက်လေး ၊ ယောက္ခမကိုဆာမိ ၊ အလင်းဆက် နဲ့ အဘဖောတို့ရေ ….နွေးထွေးစွာနဲ့ birthday wishes လုပ်ပေးကြတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှ စပြီး ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ ။ လာဘ်ပွင့်လို့ စီးပွားဥစ္စာတိုးကြပါစေနော် ။
တကူးတက surprise လုပ်ပြီး လက်ဆောင်တွေပို့ လို့ …သတိတရနဲ့ မက်စေ့ခ်ျတွေပို့ SMS တွေပို့လို့ wish လုပ်ခဲ့သူ အန်ကယ်ခင်ခနဲ့ အစ်မ မဒမ်ခင်ခကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။ ပျော်ရွှင်နွေးထွေးတဲ့မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေနော် ။
မအိတုန်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပိုစ့်လေးမှာ ၀င်ရောက်အားပေးဆုတောင်းပေးကြသော၊
မွေးနေ့နုတ်ခွန်းဆက်ကြသော ရွာသူရွာသားအပေါင်းကို ခင်ခ မှ လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ၊
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြသော မွေးနေ့နုတ်ခွန်းဆက်ကြသော ရွာသူရွာသားများအား
ပြန်လည်ပြီး အသိအမှတ်ပြု welcome လုပ်ပေးသော သမီး အိတုန် ကိုလည်း ခင်ခ မှ ကျေးဇူးပါနော်။
အားလုံး ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ တိုးတက်ပြည့်စုံသော ဘ၀တွေနဲ့ ဆုံတွေ့ကြပါအုံးစို့….. ဗျာ။
ရွာထဲ အ၀င်နောက်ကျလို့ အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်…။
မွေးနေ့မှသည် ရာသက်ပန် ချမ်းမြေ့ပျော်ရွင်ပါစေကွယ်…။
ဒီတစ်ခါလဲ နောက်ကျသွားပြန်ပြီ …
အပေါ်က ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ ရွာသူ ရွာသားအားလုံးနဲ့ ခရက်ဒစ်တူ …
မွေးနေ့ မင်္ဂလာအပြင် တခြား တခြားသော မင်္ဂလာသတင်းများလဲ ကြားချင်ပါကြောင်း …..
ချစ်ရသူနဲ့လည်း မကြာခဏ စိတ်ကောက်နိုင်ပါစေ
စိတ်ကောက်တိုင်းလည်း အနိုင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော် :harr:
ထပ်မံလို့ ၀င်ရောက်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းနုတ်ဆက်ကြသော ဦးပါ၊ မမဝေ နဲ့ မနိုဗွီ တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးနော်။